Etu esi emeziwanye ihe ederede gi | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị gụọla akwụkwọ m ọtụtụ afọ, enwere m olile anya na ị hụla mmelite na ederede m. Eziokwu ka m kwuru, mgbe m dechara akwụkwọ na ọtụtụ puku isiokwu, m ka na-agbaso isi mmalite nke ederede - gụnyere grammar, nhazi, na okike.
Dị ka iyi nke onye edemede maara ihe, ebe m na-agwa onwe m ma pịnye ihe m na-ekwu, m na-ewebata ụfọdụ okwu mkpo na okwu mkparị na-adịghị mma. Obi dị m ụtọ, ndị na - agụ akwụkwọ m nabatago enweghị m ike ide ederede na kama, ha na-elekwasị anya na akụ m na-akọrọ ha.
Nke ahụ kwuru, otu ihe nyeere m aka imeziwanye ederede m bụ… ide ihe. M na-ede nkwupụta nke ọrụ (SOWs) maka atụmanya. M dee iji ikpe maka ule. M na-ede edemede ebe a. M dee ihe omumu banyere ahia. M na-ede ihe niile ụbọchị na-elekọta mmadụ media. M dee okwu mmeghe na ajụjụ maka pọdkastị. Ihe obula m dere choro ebumnuche na nghota nke ndi n’azu na ndi na ege nti.
Ka oge na-aga, ekwenyere m na m enwegoro nke ọma mana mana enweghị m ọkachamara. N'ezie, ọ bụrụ n'ịzụlite akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ọdịnaya dị mkpa, m ka na-achọ ụfọdụ ndị edemede ederede dị ịtụnanya na-arụ ọrụ dị egwu na mpempe ọ bụla ha nyere. Disciplinedọ aka ná ntị nyocha, ige ntị, na uche nke ndị edemede a nwere bụ ihe ịtụnanya. Enwere m nkwanye ùgwù dị ukwuu maka ọrụ ha.
Ihe omuma a, 29zọ XNUMX iji melite nkà gị n'ide ederede, si enchanting Marketing nkọwa atụmatụ, omume, Ọdịdị, creativity, na otu esi amalite.
Nke a bụ nkọwa ederede ederede nke infographic:
Nkebi nke 1: Omume ederede
Mepụta isi gị ederede adịghị ike. Kedu kpọmkwem ihe ị chọrọ ka mma? Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọrọ ilekwasị anya ịhọrọ okwu ndị kwesịrị ekwesị ma ọ bụ ide ahịrịokwu ndị ka mfe.
Guo oru ndi ozo dere ịghọta otú ha si etinye usoro ide ihe. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ide ihe karịa, mụọ Hemingway's Nwoke Ochie na Oke Osimiri. Ma ọ bụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite nhọrọ okwu, lee ka Ray Bradbury si eji ya ngwaa siri ike in Zen na Art nke Ide ihe; chịkọta ihe atụ kachasị amasị gị na a swipe faịlụ- nchịkọta nke ide ihe atụ ịmụta na.
Mee otu usoro ederede ederede, ma jiri ihe odide gị tụnyere ihe atụ dị na faịlụ swipe gị, ka ị wee hụ otu esi emeziwanye.
Pụta na mpaghara nkasi obi gị — ejila ihe atụ ndị ahụ wedata onwe gị ala; kama, maa aka gi ka odi mma ma nwee obi uto na mmuta ihe a—zụlite ọgụgụ isi.
Nkebi nke 2: Ide ederede
Kedu onye ị na-ede? Ezigbo ndị edemede nwere mmasị na-agụ ndị na-agụ akwụkwọ ha ma ghọta nrọ ha, egwu ha, na ọchịchọ nzuzo ha.
Kedu nsogbu ndị na - agụ akwụkwọ ga - enyere gị aka idozi ya? Ma obu ebumnuche gini ka inyere aka imezu? Ezigbo ọdịnaya nwere otu nzube doro anya-iji kpalie onye na-agụ ya itinye ndụmọdụ gị n'ọrụ.
Kedu ụzọ nke ga - enyere ndị na - agụ akwụkwọ gị aka idozi nsogbu ha ma ọ bụ mezuo ebumnuche ha? Uzo uzo bu ihe ndabere maka ederede doro anya na nke ezi uche di na ya.
Nkebi nke 3: Nhazi ederede
Isi okwu di ike jiri okwu ike ma obu nọmba iji dọta uche na iyi egwu mgbasa ozi na-arụsi ọrụ ike, ọ na-ekwukwa otu uru bara uru ịrata ndị na-eso ụzọ ka ị gụkwuo.
Oghere na-adọrọ adọrọ kwere nkwa na ndị na - agụ akwụkwọ ị ga - enyere aka dozie nsogbu ka ha wee nwee obi ume ịgụ na ya.
Isi bara uru na-egosi, nzọụkwụ site na otu, otu esi edozi nsogbu ma ọ bụ mezuo ebumnuche.
Emechi mmụọ nsọ na - eme ka ndị na - agụ akwụkwọ rụọ ọrụ - ị na - aghọ ezigbo ikike mgbe ndị na - agụ akwụkwọ ahụ hụrụ ihe ndụmọdụ gị nyere ha.
Nkebi nke 4: Usoro edemede
Jiri usoro nri nri 4-nri ike ezi uche eruba n’enweghị ihe ndọpụ uche, yabụ ndị na-agụ ya nọrọ na egwu.
Mụta otu esi eji ya doro anya asụsụ iji mee ka echiche efu doo anya ya mere ndị na - agụ akwụkwọ nwere ike ịghọta ma cheta ozi gị.
Mụta otu esi ede ahịrịokwu buru ibu, nke dị mfe ma baa uru—ezigbo okwu bụ ihe eji eme ezigbo edemede.
Dezie ezigbo mgbanwe ya mere ndị na - agụ akwụkwọ na - eji nwayọ na - efegharị n’ahịrị si na ahịrịokwu, na site na paragraf na paragraf.
Mee otu esi eme dee n'uzo doro anya ya mere ozi gị ga-eji sie ike.
Chọpụta otu ị ga-esi zere ya okwu na-adịghị ike, gobbledygook, na cliches; ma mee ka ederede gị dị ụtọ okwu ike na nsonye Nkebi ahịrịokwu sensory.
ịghọta isi nke nnyocha nyocha na na peeji nke kachasị ịbawanye okporo ụzọ ọchụchọ okporo ụzọ.
Nkebi nke 5: Nkà Mmụta Edemede
Mụta otu esi eji mbugharị-na-mbugharị-si Usoro ịkpa ákwà obere akụkọ n'ime ọdịnaya gị.
Chọpụta otu mee ka akụkọ gị kwalite na nko ndị na-agụ ya na obere ugwu.
Esi nri ọhụrụ metaphors ịgbakwunye ekpomeekpo ka rehashed na-agwụ ike isiokwu.
dee ogologo ahịrịokwu n’enweghị ume iku ume, ma chọpụta otu esi eji n'afọ iri na ụma itinye egwu n'ime ederede gị.
Nwere na nhọrọ okwu ma nwaa ọzọ mkparịta ụkayabụ ndị na - agụ akwụkwọ amalite ịmata olu gị.
Nkebi 6: Àgwà ide ihe
Mee ederede ịhọrọ, na oge akwụkwọ na kalenda gị maka ide ihe — ọ bụrụ na ị naghị akwado oge ịde ihe, mgbe ahụ ọ gaghị eme ya.
Setịpụ obere ihe mgbaru ọsọ—Dika ndiwet ikpehe ekikere kiet m ordịghe ndiwet minit 10 ke usen, ntre owo ikemeke ndiwet.
Mepụta mmekọrịta na-arụpụta ihe na gị onye nkatọ n'ime, ya mere ị nwere ike ịghọ onye ọ aụ na ọdee akwụkwọ.
Bido ide ihe, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịmeghị nwee mmetụta na-akpali akpali—Ihe ngosi gi gha enyere gi aka oru gi, okwu gi g’abia n’iru.
Wepụ ihe ndọpụ uche na omume otú ilekwasị anya—Mkpadoro anya n ’ike gi bu ike.
Iri na usoro ide ihe n'ime usoro- outline, first draft, idegharị, ikpeazụ edit-na-agbasa ọrụ ruo ọtụtụ ụbọchị otú i nwere ike iri uru nke percolation; Nyochaa ederede gị na anya ọhụrụ ka ị nwee ike mee ka ọ ka mma.
Tags: ederede di elucontentnyocha ọdịnayaotúWritingomume ide iheederede nyochaede edemede